URSULA K. LE GUIN / TODD BARTON: UMCULO KUNYE NEZIBONGO ZOVAVANYO LWEALBHAMU YEKESH - IINDABA
Umculo kunye nemibongo yeKesh
Ngo-1985, umbhali wenoveli owaziwayo wasebenza nomqambi uTodd Barton ukwenza icwecwe lolwimi olungavakaliyo kunye nezixhobo. Ukuphinda kukhuphe kugqame kwizityebi, ubugcisa bokuntywilisela u-Ursula K. Le Guin wafuna ukuyila.
Dlala iTrek Umdaniso weHeron-Ursula K. Le Gain / Todd BurtonUkuhamba Ibhendi / Thenga
Ursula K. Le Guin, umbhali oyintloko owasweleka ngeyoMqungu eneminyaka engama-88, wayesaziwa kakhulu ngencwadi zakhe Abahluthiweyo, uthotho lwakhe lwe-Earthsea, kunye neyona nto ithengiswa kakhulu Isandla sasekhohlo sobumnyama, eyayicinga iplanethi enabemi abangenazimpawu zingaguqukiyo zesini. Emva Ubumnyama yapapashwa ngo-1969, yaba yiklasikhi yeentsomi zesayensi kunye neentsomi zesayensi yabasetyhini, uhlobo uLe Guin wanceda ukuba lubekho.
Neil imimandla emincinci yomoya
Amaxesha anzima ayeza, apho siya kube sifuna amazwi ababhali abanokubona ezinye iindlela zendlela esiphila ngayo ngoku, banokubona kuluntu lwethu oloyikayo kunye neetekhnoloji zalo ezingafunekiyo kwezinye iindlela zobomi, kwaye sicinge nezizathu zokwenyani zethemba , Le Guin wathi kwintetho yomlilo kwi-National National Awards Awards ka-2014. Siza kudinga ababhali abanokukhumbula inkululeko-iimbongi, ababonisi-iinyani zenyani enkulu.
Kwiinyanga zakhe zokugqibela, wayelungiselela ukukhutshwa kwakhona komsebenzi we-1985 owawusele ugcwele phantsi kwe-radar. Umculo kunye nemibongo yeKesh, icwecwe lakhe lokusebenzisana kunye nomqambi kunye nothintsho lwento u-Todd Barton, lakhutshwa okokuqala kwikhasethi ngo-1985, lihlanganiswe nenoveli kaLe Guin Ndisoloko Ndiza Ekhaya , intandokazi yehashe elimnyama phakathi kwabafundi bayo. Kukubonisa, iphepha elinama-523 iphepha lesizwe esizayo sabemi bomthonyama abaphila ngokuchasene nobukoloniyali kwiminyaka engama-500 ukusukela ngoku, ubomi babo bulawulwa ngokwendalo nangamaxesha onyaka, ibali labo libaliswa nguLe Guin kwiintsomi, imibongo, imidlalo, iiresiphi, I-ethnography, i-glossary, kunye neemephu ezotywe ngesandla. Ngaphandle kokunikwa ezo ntlobo zemveli, uLe Guin wathi naye uyafuna ukuwuva umculo. Wabhalisa uBarton waza waqalisa inkqubo ecacileyo kwaye yaqwalasela ngokucokisekileyo eyabangela ukukhohlisa Umculo kunye nemibongo yeKesh.
I-Heron Dance, ingoma yokuqala yenye yeengoma ezikhuthazayo kwi-albhamu-engenamazwi, i-elektroniki, kunye ne-organic, ene-synthesizer, izixhobo ezenziwe ngesandla, ukubetha kunye nento ebonakala ngathi sisixhobo esinjenge-dulcimer. Njengeveli, Umculo kunye nemibongo yeKesh utsala ngokukhululekileyo kwaye ngokungathandekiyo kwaye ngandlela thile unobtrusively kwiintlobo ezahlukeneyo-ezingcwele, ikwayari, imibongo, i-avant-garde, encinci kunye neNew Age. Kwipakethe yayo yoqobo, iyafana nokulahleka kukaTerry Riley, okanye i-bootleg kaJohn Cage kunye noMerce Cunningham wokuqala Yenzeka -Into enamahlathi nekamva. U-Barton utyelele i-Le Guin kwifama yakhe yase Napa Valley, indawo ebonakalayo Ndisoloko Ndiza Ekhaya , apho aqokelela khona urekhodo lwentsimi. Izandi zokuma komlanjana kunye neekrikethi zibonakala kwiNgoma yeTwilight; inkampu yomlilo kunye neecoyotes zihluza kumculo wababhinqileyo ka-Ewe-Ukucula, iinkuni zingena kweso studio.
Iingoma zeKesh zithetha ngemeko yokomoya esekwe emhlabeni, zibhekisa kwiminyhadala yamaNative American uqobo: Umbongo weSun Dance, Ingoma yoMlambo ,; kukho iingoma zemithi yomngcunube, oonombombiya, ooqongqothwane nezagwityi. Izihloko zizodwa ziyingozi; ngaba olu lwabiwo-mali lwenkcubeko? Kwizandla ezingalunganga, banokuba kunjalo, ngakumbi ukuba uLe Guin noBarton bakhethe ukuzisekela kwiingoma ezingcwele okanye ezingcwele. Kodwa uLe Guin wagqiba kwelokuba angamameli kangako komnye umculo kodwa aye kumhlaba ngokwawo, njengoko wayenzile ukusukela ebuntwaneni.
u-hodgy ubetha tyler umdali
U-Le Guin uyintombi yeenkcubeko ezimbini ezibalaseleyo ze-anthropologists abagxile emsebenzini wabo kwizizwe zaseMelika zaseMelika eMantla California, ngakumbi i-Yahi, isizwe saseCalifornia esatshabalaliswa ngohlanga. Kwinkulungwane yama-20 yokuqala, uAlfred Kroeber wenza ushicilelo lomthwebeba we-Ishi, olilungu lokugqibela le-Yahi, ukuthetha nokucula ngolwimi oluza kufa ikakhulu naye. UTheodora Kroeber wabhala Ishi kwiiLizwe eziBini, kunye nenye, incwadi eyintsomi eyinxalenye esekwe kwibali likaIshi.
Ngaphandle kwamathandabuzo, uLe Guin wakhula esiva urekhodo lwe-Ishi kunye nomculo wabanye abantu bomthonyama. Abahlobo baseMelika baseMelika babehlala behlala ezindlwini zabazali bakhe, ukuhamba ngokulula kweNapa Valley. Iingoma zakhe zeKesh zihlonipha ubulula beengoma kunye nomculo ongcwele, kodwa baziva behlukile, benyani kwihlabathi labalinganiswa abadalwe nguLe Guin. U-Barton wakha izixhobo yena no-Le Guin ababecinga ukuba abantu base Kesh bayakudlala — uphondo oluziimitha ezisixhenxe ubude, ifleyiti eyenziwe ngethambo — emva koko wazifundisa wazenza ezinye iimvumi ezikwi-albhamu, ukuba bazidlale. Xa wabuza uLe Guin ukuba uKesh uthetha isiNgesi, waphendula, Drat! Kwaye emva koko wachitha iinyanga esenza oonobumba, kubandakanywa ngasemva kwinoveli, kunye nesigama kumagama akhe.
Awudingi ukuthetha iKesh, okanye ukuba uyifundile incwadi, ukuze uxabise i-idiosyncrasies yale albhamu, kodwa enye iphakamisa ukuqonda komnye. Cinga nge Umculo kunye nemibongo yeKesh njengesimemo esivulekileyo sokungena kwelinye, elinye ilizwe leLe Guin. I-albhamu ihamba ngothotho lwe-cappella okanye iingoma ezihamba kunye nokufaka amalungiselelo eekwayari zamazwi ababhinqileyo, awamadoda, kunye nokudibanisa zombini. Umbongo wokuFundisa, ohanjiswe ngesantya esiqhelekileyo, uya kuvakala uluqhathi kakhulu kubaphulaphuli bomculo wemveli; umbongo weLanga woMdaniso ocothayo uwuphonsa ngelinye ilizwe, ithoni yeemonki. Mamela ngaphandle kunye namanzi omfula owavayo eLe Guin kunye neengoma zikaBarton zinokuvumelanisa ukuya kumlambo onodaka odlulayo; mamela ngexesha lobusika besixeko kwaye isingqisho esineengoma kunye neethoni ezinjengeentsimbi ziya kudibana kunye nerediyetha yakho. Ezi zizandi ezifuna ukuthetha ukususela ngelo xesha nangaphaya, ukuza kuthi ga ngoku.
Abantu kule ncwadi banokuba bebehlala ixesha elide, ixesha elide ukusukela ngoku eMntla California, u-Le Guin ubhale kumaphepha okuvula e Ndisoloko Ndiza Ekhaya. Iinguqulelo ezivela kuncwadi lwe (okanye) lwekamva. Umculo weKesh kunye nemibongo, nayo, yeyala maxesha kwaye yeyamandulo ngaxeshanye-ifikelela emva kwiingoma zamandulo zomhlaba ukulungisa umonakalo onetyhefu owenziwe ngokwawo. Ukutsala kwakudala ukujongana nabantu bexesha elidlulileyo, ezi ngoma ziyabhiyoza kunye nomnxeba wokucacisa ngaxeshanye.
ikamva kunye nenduli kaJona
UMary j blige cds
irabha yeglasper lauryn induli
chris cornell iintsuku ezimnyama
I-touche amore isindile
Iiraps ezikhululekileyo malunga nemali
uDick dale wayesaziwa nge: